Brooke Kovanda's Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Brooke Kovanda
Brooke Kovanda ndiOrr Fellow & Kushambadzira Murongi pa PERQ, inobatanidza tekinoroji kambani muIndipolis. Ikoko anotyaira zvemukati uye dhizaini yezvigadzirwa zvekushambadzira, uye inopa rutsigiro rwekutsvaga kutsva kwemusika uye kuongorora. Kunze kwebasa, Brooke anofarira kuverenga, kufamba, kuteerera kune diki Rock 'n' Roll.
Iko Kukanganisa kweMicro-Nguva paRwendo rweVatengi
Chishanu, February 10, 2017 Muvhuro, Kukadzi 13, 2017 Brooke Kovanda
Iyo inopisa yekushambadzira maitiro atakatanga kunzwa zvakanyanya nezvakawanda nezve ma micro-nguva Micro-nguva parizvino irikukurudzira maitiro emutengi uye zvinotarisirwa, uye ivo vari kuchinja nzira iyo vatengi vanotenga kune ese maindasitiri. Asi chii chaizvo chiri chidiki-nguva? Ndedzipi nzira dzavari kuumba rwendo rwevatengi? Izvo zvakakosha kuti unzwisise kuti nyowani mutsva sei iwo zano reiyo micro-nguva iri mune yedhijitari kushambadzira nyika. Funga neGoogle inotungamira muripo pakutsvagurudza nzira idzo tekinoroji yefoni inochinja